Tiger Woods dia TSY miasa amin'ny fahalemeny | Martech Zone
Wednesday, May 9, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
ChangeThis dia tranokala tsara raha tsy nanana fotoana ahita azy ianao. RNH, anio Manifesto na izany aza.
Heverinao ve fa ny lozisialy Tiger Woods dia manao fanazaran-tena mandritra ny ora maro mba hitazomana izay mora indrindra aminy? Nilaza i Flip Flippen fa hadino ny mahita ny tanjanao fa ny fahalemenao no manakana anao tsy hahatratra ny tsara indrindra vitanao.
Ny marina dia tsy miasa amin'ny fahalemeny mihitsy i Tiger Woods. Fantany ny tanjany ary mandany fotoana sy ezaka be dia be izy handaminana tsara ireo hery ireo.
Tamin'ny faha-39 taonako dia nahita zavatra vitsivitsy tamin'ny fiainana aho, saingy ireto misy vitsivitsy:
Saika tsy afaka miova ny olona. Saingy tsy sarotra amin'ny olona ny mampifanaraka - indraindray mila fanerena malefaka fotsiny izy ireo.
Jereo hoe inona no tianao ary izay tena hainao… ary fantarinao ny fomba hivelomana amin'izany. Tsy ho sambatra intsony ianao.
Ny mpitondra mifantoka amin'ny lesoka dia tsy mpitondra mihitsy. Ny mpitondra marina dia mahatakatra izay mahaizan'ny olona ary mampifanaraka ny tanjona amin'ny fahaiza-manao. Tsy misy olona roa mitovy ary tsy tokony hisy mihitsy, mandrakizay ampitahaina.
Ny mpitarika izay mamantatra ny mpiasa iray dia tsy mety hahomby dia hanao an'io mpiasa io amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo lalana izay ahombiazany, na dia eo am-baravarana aza izany. Masiaka ny fametrahana olona amin'ny toerana tsy mahomby ary mitazona azy ireo any.
Rehefa omenao ny olona fahombiazana ny olona, ​​dia tsy haharesy anao izy ireo.
Manontany i Flip hoe: "Raha mino ahy ianao, na tsy mino an'izany aza ianao dia valio ity fanontaniana ity: inona no zavatra voalohany manakana anao tsy hanana fahombiazana sy fanatanterahana avo kokoa?"
Mihevitra i Flip fa ny fahalemenao no mitazona anao. Heveriko fa tsy izany mihitsy. Mino aho fa ny laharana voalohany mitazona anao dia ny tsy mbola namantaranao sy nahitanao làlana iray hampiasainao tanteraka ny tanjanao.
Izaho dia mpilalao golf tsy mendrika. Tiger Woods dia mpilalao golfa lehibe. Raha mandany ny fiainako manontolo amin'ny fanatsarana ny lalao golf aho dia tsy hahita ny lalao Tiger Woods mihitsy. Tsy handany fotoana amin'ny fanatsarana ny lalao golf aho - handany fotoana bebe kokoa amin'ny fahatongavana ho teknolojia sy mpanolo-tsaina tsara aho. Izay no haiko tsara, izay no tiako… ary izay no mamelona ny ankohonako. Te-hahalala izay hataoko aho mba hahatongavana eo amin'ny tampon'ny lalao - satria fantatro fa efa mahay tsara an'io aho.
Ny mahasamihafa ny 99.9% marina sy ny 100% dia 0.1% ihany. Saingy io 0.1% io no mila fifantohana sy ezaka lehibe indrindra handresena. Indraindray tsy azo resena mihitsy. Tiger Woods dia nanondro ny heriny izay nahatonga azy ho 99.9% ary nandany ny heriny rehetra niezaka ny hahafehy an'io 0.1% farany io. Mety handany ny sisa amin'ny asany izy hanandrana ary mety tsy ho tonga any mihitsy. Ny lakilen'ny fahombiazany anefa dia ny fahafantarany ny heriny ary atokisany fa afaka manosika ny tenany ho 100% tokoa izy.
Tsotra ny filazan'ny iray amin'ireo mpitantana ahy teo aloha. Ny maingam-pandeha dia tsy ho tsara velively amin'ny maha martina ary ny marotoa dia tsy ho tsara amin'ny maingoka. Raha mpitondra ianao dia fantaro izay anananao ao anaty boaty fanampianao ary ampiasao amin'ny fomba tsara. Raha miasa amin'ny tenanao fotsiny ianao dia fantaro raha wrench ianao na marmara.
Vao tsy ela akory izay no nisy olona nipetraka teo amiko ary, noho ny fiahiahiahy dia nampahafantatra ahy izay tsy tsara vitako izy. Heveriko fa nanantena izy fa hiady hevitra aho na hikorontana. Nitsiky haingana aho ary nijery azy ary nilaza hoe: “Manaiky anao aho!”. Ny tena izy, ny zavatra tsy tsara nataoko dia tsy ny tiako hatao ary tsy ny zavatra tokony hataoko!
Nanoratra i Flip hoe: "Mba ho tsara indrindra vitantsika, vitantsika ve? Ary tsy maintsy? Hianatra ny fomba hampihenana ny fetran'ny fitondran-tenantsika nefa hampitombo ny tanjantsika satria ny tena fahombiazana dia mitaky mihoatra ny talenta sy fahaizana."
Hodinihiko ity ary holazaiko hoe, "Mba hahavita izay farany vitantsika, vitantsika? Ary tsy maintsy? Mianatra manatsara ny herintsika satria ny tena fahombiazana dia mitaky mihoatra ny talenta sy fahaizana."
Ny tranga iray dia i Michael Jordan, azo lazaina fa iray amin'ireo tompon-daka lehibe indrindra amin'izao androntsika izao. Nahatratra ny tampon'ny lalao i Michael Jordan ary nahatsapa fa tsy afaka nanao tsara intsony. Nahavita 100% izy. Vantany vao nanao izany izy dia nivadika baseball. Fantany avy hatrany fa tsy ho mpilalao milalao baolina mahay izy.
RNH, raha vao hitan'i Michael Jordan fa, na dia mpilalao baseball mahay aza izy, dia tsy ho mpilalao baseball tsara mihitsy. Nandao ny lalao tiany izy ary niverina tamin'ny heriny. Androany, mbola tompon-daka i Michael Jordan. Ny fahafantarana ny heriny dia tsy ho baskety intsony, fantany fa ny asa fandraharahana no lalao manaraka tokony hataony, ary miasa amin'izany 0.1% izy hitondrany azy ho any ambony.
Fantaro ny tanjanao ary ataovy izay hampitomboanao azy. Aza mandany fotoana amin'ny fahalemenao. Raha mahay manatsara ny fahalemenao ianao dia ny antonony tsara indrindra azonao antenaina. Tsy misy te ho antonony.
Araka ny Wikipedia, Tiger Woods mankafy miasa, miondrana an-tsambo, manao fanatanjahantena anaty rano, manjono, mihinana ary mihazakazaka fiara. Tsy mieritreritra ianao fa hihazakazaka ho an'ny Mr. Universe i Tiger tsy ho ela, The Bass Masters, na ny Indianapolis 500 tsy ho ela, sa tsy izany? Eny, heveriko fa tsy izany koa.
Voafehitra ny RPM an'ny bilaoginao, saingy tsy mandresy ny hazakazaka ianao!
May 9, 2007 ao amin'ny 11: 12 PM
OAY! Miombon-kevitra be amin'izay nosoratanao aho. Ny hany tsy ekeko dia ny hoe saika tsy azo ovaina. Saingy holazaiko fa mety ho sarotra be ny miova ary mora kokoa ny mijanona amin'ny toe-javatra misy noho ny manao ny fiovana ara-pihetseham-po sy ara-tsaina takian'ny asa.
Rehefa nilaza izany aho - mino mafy aho amin'ny fananganana tanjaka. Rehefa miezaka mandresy ny fahalemena ianao dia matetika kokoa ny fifantohana amin'ny fahalemena no mampitombo izany (vokatra tsy nahy).
Fa ny fananganana tanjaka dia toy ny SEO organika. Ny tanjakao dia manomboka mihena ny fahalemenao (toy ny votoaty tsara sy rohy).
Na izany na tsy izany, lahatsoratra mahafinaritra. Nanova tanteraka ny androko izany, nanamafy ny finoana fototra sasany. Misaotra anao!
May 9, 2007 ao amin'ny 11: 35 PM
Miombon-kevitra tanteraka amin'i Doug aho - ny maha samy hafa ny maha-tsara zavatra sy ny maha-lehibe dia ny 0.1% farany. Betsaka ny olona afaka mahatratra ny marika 99.9%, saingy vitsy dia vitsy no afaka mandresy an'io 0.1% farany io. Marina izany amin'ny hetsika rehetra, na golf, sary, na fandaharana.
May 10, 2007 amin'ny 7: 57 AM
Great Post Doug, manaiky aho fa tsy maintsy mampivelatra ny herintsika isika, ny olana dia rehefa miasa ho an'ny hafa dia matetika izy ireo no mifantoka amin'izany miaraka aminao ary matetika izy ireo no miezaka mametraka ny fahalemenao ho eo anoloana ary miezaka ny mihady mba hampitoviana ireo. amin'ny herinao.
Manaiky aho fa ny mpitarika lehibe dia mifantoka sy mampiroborobo ny fampivoarana ny tanjanareo, rehefa nanana mpitantana manana izany ideolojia izany aho dia niroborobo ary rehefa nanana mpitantana nifantoka tamin'ny fahalemena aho dia tsy faly.
May 11, 2007 amin'ny 2: 14 AM
Lahatsoratra tsara. Ekeko fa tsy zava-dehibe ny fanatsarana ny fahalementsika. Azo antoka fa betsaka ny zavatra tsy haintsika ary tsy afaka mandany ny fotoanantsika amin'ny fanatsarana izany isika. Mila mifantoka amin’ny herintsika isika.
May 14, 2007 ao amin'ny 8: 15 PM
Ekeko fa tokony hifantoka amin'ny tanjantsika isika fa tsy amin'ny fahalementsika. Ny asantsika dia mety mila antsika hanatsara ny olana sasany ananantsika ary tsy azontsika atao tsinontsinona izany. Mila mandinika na dia zavatra kely aza isika amin’ny toe-javatra sasany.